Maxaabiis isku-dayday in ay ka baxsadaan saldhigga dhexe ee Galkacyo iyo bilayska oo mid ka mid ah toogasho ku dilay. – Radio Daljir
Galkacyo, July 01 – Hal qof ayaa dhintay saddex kalena waa dhaawacmeen kaddib markii ciidanka bilayska ee ilaaliya saldhigga dhexe ee magaalada Galkacyo ay rasaas ku fureen rag maxaabiis ahaa oo isku-dayday in ay baxsadaan.
Qofka dhintay ayaa ka mid ahaa maxaabiistii isku-dayday in ay baxsadaan, waxaana sidoo kalena saddexda qof ee dhaawacmay ku jira askari ka tirsan bilayska sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha bilayska gobolku.
Saraakiishu waxay kaloo intaas ku dareen in ay ku guulaysteen maxaabiistu in aysan baxsan dhammaanna gacanta lagu dhigay raggii damcay in ay ka fakadaan caganta dawladda.
Isku-dayga baxsasho ee maxaabiista ayaa yimid kaddib markii taliska saldhigga bilaysku ay damceen koox maxaabiis ah in ay ka wareejiyaan qolkii ay ku xirnaayeen kaasoo laf-ahaantiisa ay isku-dayeen in ay jabiyaan dhismihiisan meelo ka mid ah ay dumiyeen xilli habeenno ah sida bilaysku Daljir u xaqiijiyeen.
Buuq iyo jaahwareer badan ayaa ka dhashay dilka maxbuuskaasi kaddib markii rag badan oo eheladiisa ahi ay ku soo qamaameen saldhigga inkastoo isla markiiba maamulka iyo odayaasha oo is-kaashanaya ay xalliyeen amuurtaasi, lana kala diray raggii saldhigga ku soo xoomay.